बीरेन्द्रको बंश विनासजस्तै यी हुन् नेपालका ठूला नरसंहार Darpansansar News
काठमाडौं । नेपालको राजपरिवारको एउटा वंश विनास भएको १८ वर्ष वितेको छ । २०५८ साल जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश विनास भएको कहालीलाग्दो दरबार हत्याकाण्डको रहस्यमै छ ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित राजपरिवारका १० जना सदस्यको हत्या भएको घटनाले विश्वमै सनसनी मच्चाएको थियो । नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डका नामले चिनिने यो हत्याकाण्डको रहस्यका बारेमा अझै नागरिकले विश्वसनीय आधार पाउन सकेका छैनन ।
तर नेपालको राजसंस्था र यससँग जोडिएका ठूला नरसंहारहरु अन्य पनि रहेको पाइएको छ । जसलाई सुन्दा र पढ्दा पत्याउनै गाहो हुन्छ ।नेपालमा कुनै पनि राजवंशको उदय हुनुको पछाडि एउटा भयानक षड्यन्त्रपूर्ण हत्या काण्ड वा सामूहिक नरसंहार जिम्मेवार रहेको कुरामा सबैजसो इतिहासकार पनि सहमत छन् ।
यस्तो सिलसिलामा पहिलो ठूलो नरसंहार च्यासलको नरसंहार मानिन्छ जसमा लिच्छविहरूले किराँतीहरूको सामूहिक हत्या गरेका थिए । भनिन्छ त्यतिबेला उक्त हत्याकाण्डमा ८ सयभन्दा बढी किराँती मारिए ।
नेपाल एकीकरणपछि भएको सबैभन्दा ठूलो हत्याकाण्ड कोत पर्वलाई मान्ने गरिएको छ । जंगबहादुरको उदय गराउने कोत पर्व विक्रम सम्वत १९०३ असोज २ गते मध्यरातमा भएको थियो । उक्त घटनामा त्यतिबेलाको नेपालका ४ सयभन्दा बढी शक्तिशाली भारदारको हत्या गरिएको थियो ।
कोत पर्व भए लगतै जंगबहादुरलाई मार्न रचिएको षड्यन्त्रपूर्ण घटनामा २३ जनाको हत्या भएको थियो । विक्रम संवत १९०३ को कात्तिक तिर भएको उक्त घटनापछि जंगबहादुर राणा निकै शक्तिशाली रूपमा देखा परेको पाइन्छ ।
त्यस्तै विक्रम संवत १९३८ सालमा तत्कालीन अधिराजकुमार नरेन्द्रवित्रम शाहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणोदिप सिंह र उनका भाइ धीरशमशेरका शाखा–सन्तानलाई तराईमा शिकार खेल्न गएको बेला मार्ने योजनाको पोल खुलेपछि धीरशमशेरले योजनामा संलग्न ४१ जनाको सामूहिक हत्या गरेका थिए ।
यस घट्नालगत्तै नरेन्द्रविक्रम शाहको योजनामा संलग्न संग्रामसूर विष्टसहित उनका पाँचजना नातेदार तथा तीनजना अन्य सहयोगीसहित ८ जनाको खुकुरीले काटेर हत्या गरिएको थियो ।
विस १९४२ मा वीरशमशेर तथा उनका भाइहरुले नेपालको सत्ता आफ्नो हातमा लिन आफ्नै काका तत्कालिन प्रधानमन्त्री रणोदिप सिंह तथा जंगबहादुरका छोराहरूको सामूहिक हत्या गरे ।
कोत पर्व हुनुभन्दा ५५ वर्षअघि नेपालका तत्कालीन शक्तिशाली भारदार त्रिभुवन खवासको घरमा आयोजना गरिएको भोजका क्रममा तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहसँग भएको भनाभनका क्रममा आफ्नै भाइ शेरबहादुर शाहले रणबहादुर शाहको हत्या गरेपछि त्यहीं दलबलसहित रहेका भीमसेन थापाले शेरबहादुर शाहसहित लगभग ५० जनाको सामूहिक हत्या गरे । उक्त घटनापछि भीमसेन थापा नेपालको राजनीतिमा सर्वसत्तावादीका उदाएका थिए ।
यूकेमा नम्रताको खुलेको सारीले दर्शकलाई बनायो भुतुक्कै, जता धिरज उतै जसिता, के पाक्दैछ ?
काठमाडौँ । आखिर लण्डनमा के चल्दैछ नायक धिरज मगर र नायिका जसिता गुरुङ बिच ? आखिर हरेक � ...
प्रधानमन्त्री ओलीको फेरि अर्को विदेश भ्रमण तयः जेनेभा देखि बेलायतसम्म पुग्ने
कोरियाको धर्म प्रचारक युनिभर्सिटीसित फेरि सम्झौता
डोजरकाण्डबारे धुर्मुस-सुन्तलीले भनेः अज्ञानताबस भएको भुलप्रति क्षमाप्रार्थी छौँ ’
कर्मचारीले सडक आन्दोलन गरे स्वीकार्य हुँदैनः मन्त्री पण्डित
अमेरिकी भिसा लिन नयाँ नियम, वार्षिक १ करोड ४७ लाख मानिस प्रभावित
दरबार हत्याकाण्डको १८ वर्षः कहालीलाग्दो त्यो घटना अझै रहस्यमै
लिभरपुलले जित्यो युएफा च्याम्पियन्स लिगको उपाधि
यसकारण प्रधानमन्त्रीले होटल उदघाटन गर्न मानेनन्
लालगेडी जस्ता थिए रविन्द्र, वाइडबडीमा निर्दोषः प्रधानमन्त्री ओली